Setoor,koronto Dhaliyaha,matoor Koronto - Www.fmwpower.com
khaladaadka guud ee curiyaha iyo hababka baarista-2
Cilad-sheegashada cilladaha cutubyada casriga ah waxay noqon karaan u qaybsan yahay ogaanshaha hore iyo ogaanshaha qoto dheer sida ku xusan qoto dheer ee ay ogaanshaha. Ogaanshaha bilowga ah wuxuu ku saleysan yahay khaladka ifafaale oo go’aamiya qiyaastii kaladuwan ee sababta ciladdu. Ogaanshaha qotada dheer wuxuu ku saleysan yahay natiijooyinka baaritaanka bilowga ah si loo falanqeeyo oo raadi waxa sababay fashilka ilaa qaybta khaaska ah ee ciladdu ay jirto helay.
Cilad-sheegashada casriga casriga waa la qeybin karaa galay: ogaanshaha cilminaqsiga, nidaamka is-baadhitaanka, qalab fudud ogaanshaha iyo ogaanshaha qalab gaar ah.
1) Cudurka ogaanshaha Ogaanshaha ogaanshaha waa ogaanshaha, fahmitaanka, qabashada, iyo urta astaamaha unugga iyada oo loo marayo xubnaha dareenka ee jidhka bini-aadamka, ka dibna lafa-gurayo iyo xukumaan astaamaha qaladka cilad. Habka ogaanshaha tooska ah si weyn ayey u kala duwan tahay waxayna kuxirantahay khibradaha baaraha iyo iyo aqoonta shaqaalaha. Khubarada cilmiga leh ee khibradda leh ayaa isticmaali kara dareenka habka ogaanshaha si loo baaro inta badan ciladaha dhici kara qaybta, oo ay ku jiraan ogaanshaha bilowga ah iyo go'aaminta saxda ah ee ciladaha gaarka ah. The Waxyaabaha ugu waaweyn ee baaritaanka ogaanshaha ayaa ah: Fiiri, taasi waa, baarista aragga. Ujeeddada ayaa ah in la fahmo nooca nidaamka iyo nooca korantada elektaroonigga ah (hagaajinta korantada) cutubka, iyo in meesha laga saaro sababaha guud ee sababa ka hor intaadan gelin baaritaan iyo faahfaahin dheeraad ah. Sida nooca unugga, nooca nooc koontaroola elektiroonigga, shirkadda wax soo saarka, taariikhda wax soo saarka, iwm. si weyn ayey waxtar u leh u xallinta cilada. Ka qaad filter-hawada hawada, iska hubi wasakh, qashin ama wasakh kale oo ku xeeran sheyga shaandhada, kuna beddela haddii lama huraan, maxaa yeelay xirmidda filterka hawada waxay saameyn ku yeelan doontaa saxnaanta hawada ogaanshaha mugga. Kormeer tuubada faakiyuumka ah ee gabowga, dillaaca ama tuujinta, iyo Hubi in tuubbada faakiyuumka ay soo mareyso dariiqyada oo meesha la rakibo ay wanaagsan yihiin. Hubi heerka isku xirka suunka nidaamka xakamaynta, sida haddii qalabka dareeraha ama qalabka korantada ee actuator uu fiican yahay, iyo in kale Xiriirka ka dhexeeya suumanka waa mid fidsan ama la gooyey, ha ahaato xarig waa la gashaday ama waa mid gaagaaban oo ka dhexeeya siligyada, iyo inuu yahay koronto iyo bareesada Xiriyaha korantada ayaa xiran. Sug. Hubi dareeme kasta iyo jile kasta waxyeelo muuqata. Haddii ay suurtagal tahay in la hawlgaliyo unugga oo la hubiyo in daadku ka soo baxayo qaadashada iyo daalista badan. Si dhakhso leh loo helo isha qalad, waxaa marka hore lagama maarmaan ah in la fahmo xaaladda iyo xaaladaha ka cilad, sida ay u dhacday, iyo in kale iyo in kale macluumaadka la xiriira cilada. Si taas loo gaaro, waa inaan si taxaddar leh u dhageysanaa Rabbiga Sharaxa ah ciladda cilad ee xubnaha shaqaalaha. In kasta oo Tilmaanta isticmaalaha ayaa laga yaabaa in si khalad ah loo fasiro ama loo dhammaystiro, waxay noqon kartaa khilaaf, laakiin badanaa waa suurta gal in kor loo qaado furaha dhibaatada. Dhaqanka ugufiican ayaa ah inaad ka fikirto ogaanshaha bilowga ah ee soo socda ka dib markaad dhageysato isticmaaleha fekerka bilowga ah, ka dib weydii su'aalo muhiim ah oo kaa caawinaya go'aaminta ama diidmada Natiijooyinka baaritaanka bilowga ah, oo si taxaddar leh u diiwaangeliya oo u sameeya cilad leh natiijooyinka baaritaanka ogaanshaha. Aasaaska. Dhageysiga, inta badan dhageysiga dhawaaqa Shaqaalaha shaqeeya, haddii uu garaacayo, ama uu garaacayo, iyo in kale waxaa jira dhibaato, in ay jiraan waxyaabo aan caadi ahayn oo sanqadha shaqada kala duwan ka mid ah qaybo kala duwan. Tani waxay u baahan tahay uruurinta khibrada muddada dheer si sax ah xukumaan. Tijaabadu badanaa waxay ku saleysan tahay kormeerka kor ku xusan, iyo Mashiinka imtixaanka lala beegsaday waxaa loo isticmaalaa si loo go'aamiyo khaladka si isku mid ah.
2) Isticmaalka unugga-baaritaanka Nidaamka lagu baaro cutubka cilad-sheegidda nidaamka is-baarida ayaa is-baari kara qaladka nidaamka. Waa hab fudud oo dhakhso ah oo lagu ogaanayo qaybta hadda jirta ogaanshaha, laakiin baaxadda ogaanshaha ayaa ka fog isticmaalka dhabta ah. Shuruudaha raadinta dhibaatada. Had iyo jeer waa kiiska in unuggu aanu ahayn u shaqeeya si caadi ah oo aan xiriir la lahayn nidaamka kontaroolka elektaroonigga ah. Dhanka dhinaca kale, iyadoo ay ugu wacan tahay xaddidaadda nidaamka unugga-baaritaanka, waa Suurtagal ma aha in la qaabeeyo nidaam is-baarid si loo baaro dhammaan ciladaha suurta galka ah. Sidaa darteed, habka baarista aragga waxaa badanaa loo isticmaalaa kormeerka iyo xukun. Shaqoku waa mid aan looga maarmi karin nidaam kasta waqti kasta.
3) Isticmaalida qalab fudud ogaanshaha Isticmaalidda ogaanshaha aaladda sahlan waa in la istcimaalo tiro-dhowr iyo a oscilloscope sidii qalab ujeeddo guud ahaaneed oo lagu ogaanayo ciladaha xakameynta elektaroonigga (hagaajinta korantada), sababtoo ah qayb kasta oo ka mid ah xakamaynta elektiroonigga (hagaajinta korantada) waxay leedahay qiimo iska caabin ah. Range, kala sooca korantada wax soo saarka iyo hiigsiga wax soo saarka inta lagu jiro hawlgalka. Sidaa darteed, isticmaal mitiro mitir si aad u cabbirto caabbinta iyo korantada wax soo saarka, isticmaal qalabka loo yaqaan 'oscilloscope' si aad u tijaabiso mowjadda korantada soo-saarka marka ay ka kooban tahay shaqeeya, oo cabir isku-darka a multimeter si loo xukumo bal in qayb ama xariijintu waa caadi. Habkani waxaa lagu gartaa mid fudud hababka baaritaanka iyo qiimaha qalabka oo hooseeya. Waxaa badanaa loo isticmaalaa cilad ogaanshaha nidaamka kontroolka elektaroonigga ah (hagaajinta korantada) iyo korontada Qalabka, sidaa daraadeed qaabkan waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo go'aano qoto dheer oo khaladaadka ah. The Faa'iido darrooyinka ayaa ah in xiriiriyaha uu leeyahay baahi sare. Markaad isticmaaleyso mid fudud qalab, hawl wadeenku waa inuu lahaadaa faham qeexan oo ku saabsan qaab dhismeedka iyo isku xirka qadka si loo helo ogaanshaha qancisa.
4) Baadhitaano la sameeyay Aaladda baarista aaladda unugyada baaritaanka cudurrada gaar ah waxaa loo qeybiyaa: falanqeeyaha kombuyutarka desktop, falanqeeyaha kombiyuutarka la qaadan karo iyo kumbuyuutarka jeebka falanqeeyayaasha. Waxaa ka mid ah falanqaynta ciladaha koontaroolada elektiroonigga ah (hagaajinta korantada) nidaamka, sida ugu badan loo adeegsado waa kumbuyuutarrada la qaadan karo falanqeeye. Guud ahaan, unugyada casriga ah waxay leeyihiin kombiyuutarka baaritaanka qaladka, taas oo si weyn u wuxuu wanaajiyaa kartida ogaanshaha ee kontoroolka elektiroonigga ah (koronto hagaajin) nidaamka. Laakiin qiimaha falanqeeyayaasha iyo barnaamijyada falanqaynta ayaa sarreeya.
5) Tijaabada Baadhitaanka Calaamadaha Calaamadaha Habka Xaaladda ugu adag ee ogaanshaha ciladdu waa qalad, laakiin waxaa jira ma jiraan astaamo muuqda oo fashilaad ah. Xaaladdan oo kale, falanqaynta guuldarrada guud waa inay noqotaa la fuliyay ka dibna shuruudaha iyo deegaanka ay lamid yihiin ama la mid yihiin cutubka guuldarrooyinka waa la iswaafajiyaa. Iyadoo aan loo eegin khibradda hodanka ah ee shaqaalaha dayactirka iyo aqoonta tikniyoolajiyadda, haddii gunaanadka ee ka dhalan la'aanta lama xaqiijin, dhinacyo muhiim ah ayaa la iska indhatiri doonaa dayactirka. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah dhibaatooyinka ka dhaca gobolka qabow ee unugyada laguma ogaan karo gobolka kulul. Qaabka loo yaqaan 'gariir' habka kuleylka, habka biyaha loo qubeysto, habka buuxa ee biyaha, iwm.
Akhriska La Xiriira: Generator Set , Diesel Generator , Koronto dhaliyaha
Generator Set Diesel Generator Koronto dhaliyaha
Hore : matoor casri ah ayaa dejiyay cilad-sheegis iyo talaabooyin dayactir
Xiga : khaladaadka guud ee curiyaha iyo hababka baarista-1